Xildhibaan taariikh cusub dhigaya iyo afar xildhibaan oo kale oo maanta la doortay | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xildhibaan taariikh cusub dhigaya iyo afar xildhibaan oo kale oo maanta la...
Xildhibaan taariikh cusub dhigaya iyo afar xildhibaan oo kale oo maanta la doortay
Baydhabo (Dalkaan.com) – Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa maanta dib uga bilaabatay doorashada shan kursi oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo deegaan doorashadooda ay tahay magaaladaasi.
Doorashada kursiga koowaad ee HOP#175 oo la qabtay ayaa waxa ku soo baxay Dr Cabdirashiid Maxamed Nuur (Jilay) oo helay 70 cod, halka musharaxii la tartamayay oo ahaa Aadan Maxamed Ibraahim uu isna helay 22 cod, waxaana halaabay saddex cod.
Kursigan waxaa horay uga fadhiyey xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed Taaw oo ka mid ahaa baarlamaankii 10-aad ee dalka.
Sidoo kale kursiga labaad ee HOP#159 waxaa ku tartamay labada musharrax ee kala ah Maxamed Bare Maxamuud iyo Cabdullaahi Maxamed Isaaq, waxaana kursiga ku guuleystay Maxamed Barre oo ka mid noqonaya baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya.
Guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed ayaa ku dhowaaqay in Maxamed Barre Maxamuud uu helay 72 cod, halka musharaxii la tartamayay uus helay 23 cod.
Waxaa sidoo kale kursigaan ku fadhiyay Baarlamaankii 10aad Xildhibaan Xasan Maxamed Ibraahim oo laga reebay inuu ka qayb-galo tartanka.
Kursiga saddexaad ee HOP#188 waxaa kusoo baxay Maxamed Cabdi Maxamed oo helay 73-cod, halka musharaxii la tartamayay Cabdisamed Aadan Isaaq uu heley 27-cod, sidoo kale waxaa halaabay 1-cod, sida uu shaaciyey guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed.
Maxamed Cabdi Maxamed, ayaa noqonaya xildhibaankii ugu da’da yaraa ee soo galay Golaha Shacabka Soomaaliya, waxaana la sheegay inuu yahay kaliya 25 jir, taasi oo taraiikh cusub dhigeysa.
Kursiga HOP#185 waxaa kusoo baxay Cabdiraxmaan isaaq Maxamed oo helay 71-cod, halka musharaxii la tartamayay ee Maxamednuur Maxamed uu heley 24-cod. 6-cod ayaana ayaa halaabay.
HOP#177 waxaa kusoo baxay Cabduqaadir Shekh Cali (Baraka) oo helay codad gaaraya 75-cod, halka musharaxii la tartamayay Maxamuud Abuukar Kheyr uu kaheley 16-cod. Kursigan waxaa hore ugu fadhiyey xildhiban Ibrahim Yarow.
Koonfur Galbeed ayaa dardar-gelineyso doorashada Golaha Shacabka oo muhiim u ah mida madaxweynaha, waxayna noqota maamulka ugu horreeya qabashada doorashooyinka.
Muxuu Mareykanka ka yiri doorashadii Xasan Sheekh?
Faah faahin: Qarax khasaare geystay oo ka dhacay BALCAD
Xog: Deni oo qorsheynaya laba tallaabo oo xasaasi ah marka uu ku laabto Puntland
Madaxweyne Erdogan: Laba arrin ayey muhiim noogu tahay doorashada Soomaaliya
Daawo: Prof. JAWAARI oo si cajiib ah uga hadlay dib u doorashada Xasan Sheekh
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo dhambaal muhiim ah gaarsiiyay Xasan
Deg Deg Farmaajo oo Ciidan u diraya itoobiya, Muxuu salka ku...
Admin - November 4, 2021 0
Ralf Rangnick ayaa qiray inuu Luke Shaw Maqnaan Doono Asbuucyo kale
Tottenham Hotspur oo diyaar u ah inay hoos u dhigto qiimaha...
Deg deg Madaxtooyada oo Labo Musharax Qorshe Adag La damacsan 17/11/2021
Sanbaloolshe oo farriin culus u diray xildhibaanada diidan inay qaataan shahaadada
Saddex ciyaaryahan oo dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid kulanka...
Faah-faahin: Muxuu yahay howlgalka cusub ee ATMIS ee beddelaya AMISOM?
Maxay Rooble iyo Qoor Qoor uga dhigan tahay sida loogu kala...
Admin - March 12, 2022 0